Miseho amin’ny endrika hafa kosa izany fanodikodinam-bola izany any Ampanefena satria fampitomboina ny « index » ao anaty faktiora ny volana lasa, izay mampiakatra ny vola aloan’ny mpanjifa no ataon’ny mpiasan’ny JIRAMA any an-toerana. Mbola tsy voafaritra ny fatiantoka vokatr’ity asa ratsy any Ampanefena ity.
Any Manja dia ny solika manodidina ny 7000 litatra, entina mampihodina ireo milina mpamokatra herinaratra kosa no ahodikodin’ny mpiasa any an-toerana.
Efa eo an-dalam-panaovana fanadihadiana lalina amin’ireo tranga roa farany ireo ny mpitantana ny orinasa.
Mitohy hatrany kosa ny fanaovana fitsirihana sy fanadiovana manerana ny biraon’ny JIRAMA. Tsy mitsitsy amin’ireo mpiasa izay voaporofo fa manao asa ratsy eto anivon’ny orinasa ny mpitantana ny JIRAMA, toy ny tany Nosy-Be dia mpitantana sy mpiasa maromaro no efa nalàna tamin’ny asany.